Niknayman: ဒဏ္ဍာရီထဲက မီးဌက်
ဒဏ္ဍာရီထဲကမီးဌက် (phoenix) ပမာ
ချစ်အမေ ဈာပန သို့ အပြန်
နိုင်ငံနဲ့အချစ်ရေး.
နိုင်ငံနဲ့အိမ်ထောင်ရေး.
နိုင်ငံနဲ့သားသမီး ရေး.
နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘ၀..
နိုင်ငံနဲ့တဘ၀လုံး.
မီးရှို့ ကြေပျက်..ပြာပုံသို့ စတေးခဲ့
သူ့ အဖေဖွဲ့ ပေးခဲ့တဲ့ စစ်တပ်က..အလိမ္မာနဲ့ သူ့ ကိုသတ်နေ
ကျောကိုချ တဲ့ဒါးပြကို..မျက်ရည်ကျခေါင်းငုံ့ ခံ ရိုး
ချစ်သောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏(၆၂) မွေးနေ့့မှသည်..အမေရည်မှန်းသမျှအားလုံးပြည့်ဝပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။
Posted by Niknayman at 12:05 AM